Cuduradda la kala qaado/HIV
Goorma ayaad isbaartay?
Siddee ayuu u dhacayaa baaritaanku?
Calaamadaha cudurada la kala qaado
Cagaarshoow nooc B
Xeerka Cudurada Gudbi kara
>> Xiniinyaha & guska
Siddee ku nadiifisaa guska?
Galka xiniinyahaaaga fiiri!
Galmadda iyo waxa galmada la xariira
Shahwada oo dhaqso ku timaada
Khaniis ama labeeb?
Talo jeedinta kondomka
Femidom � waa mid lagu beddelan karo
Ku saabsan isbitaalka
Ku saabsan Isbitaalka Ragga ee J�rva
Booqashadu ma lacagbaa?
Siddaad nagu heli lahayd
Wada xaajoodka kondhomka � waxay kor ugu qaadaysaa isticmaalka kondhomka 10 daqiiqo!
Balan qaado markaad nasoo booqatid.
ISKUULKA, URURRADA IWM
Waxbaan barnaa iyo waxaana bixinaa qudbad. Waxaan bixinaa xal shaqsiyadeed. Nala soo xariir!
Xiniinyaha raggu xuubka ayay ka jaqaan guska hoostiisa badanaana waxay heliyaan labada xiniin. Xuubka xiniintu timo ayay leedahay wayna war-wareegtaa sababtoo ah dhamaan dhidigka iyo qanjirka aad ka dhax arkayso jirka hoostiisa.
Balaca xuubka xiniintu waxay isku badashaa si joogta ah sidey u ilaaliso xiniinta iyo howl qabkooda. Xiniintu waxay u baahan tahay cimilo ilaa 34 �C sidey u shaqeyso iyo, cimiladan, xuubka xiniitu wuu weynaadaa. Waxaad dhihi kartaa xuubka xiniintu wuu yaraadaa markay qaboodahay xiniintuna waxay u baahan tahay iney ka qaadato jirka kuleyl markay kuleylkuna jiro cimilada xuubka xiniintu waa weynaadaa.
Xiniitu waa labo ugxuumood kala go�an oo ku jira xuubka xiniinta shahwada raggu ay ku Xiniitu waa labo ugxuumood kala go�an oo ku jira xuubka xiniinta shahwada raggu ay ku Haddii aad dhib ku qabto xuubka xiniinta oo aad dareemayso wal-wal, soo wac Isbitaalka Ragga ee J�rva siddaan balan uga qaadato dhakhtarada yada.
Tel: 08-123 39390 Rinkebysv�ngen 70 B, dabaqa 3aad,
163 74 Sp�nga